नेपाल एयरलाइन्सले घटायो हवाई भाडा, कहाँ कति ? - ramechhapkhabar.com
नेपाल एयरलाइन्सले घटायो हवाई भाडा, कहाँ कति ?
सिमकोट – सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सले सिमकोट–नेपालगञ्जको हवाई भाडादर घटाएको छ। सडक यातायात नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लाका जनताको लागि एयरलाइन्सले हवाई भाडादर घटाएको हो।
नेपाल एयरलाइन्स हुम्लाका प्रमुख बलबहादुर सुनारले आइतबारबाट लागू हुने गरी सिमकोटबाट नेपालगञ्जका लागि हवाई भाडादर घटाएको जानकारी दिए। अब सिमकोटबाट नेपालगञ्जका लागि हवाई भाडादर पाँच हजार ९१५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसमा टिकटदर पाँच हजार ८१५ र एक सय एयरपोर्ट ट्याक्स रहेको छ।
यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले सात हजार २१० रुपैयाँ भाडा लिने गथ्र्यो। एयरलाइन्सले केही दिनअगाडि मात्र हुम्लामा हवाई उडान विस्तार गरेको थियो। अहिले यात्रुको सहजताका लागि भाडादरसमेत घटाएको हो।
हाल एयरलाइन्सले आइतबार, सोमबार, बिहीबार र शनिबार सहुलियत उडान भर्दै आएको छ। सिमकोटबाट नेपालगञ्जका लागि अन्य निजी एयरलाइन्सहरुले ६ हजारभन्दा बढी भाडादर लिने गरेका छन्। नयाँ भाडादर लागू भएपछि नेपाल एयरलाइन्सका जहाज सिट क्षमताअनुसार यात्रु पाएको छ।
नेपाल एइरलाइन्स नेपालगञ्जका निर्देशक किरणमान श्रेष्ठले नेपालगञ्जबाट पनि निजी एयरलाइन्सभन्दा सस्तोमा उडान भरिरहेको बताए। निजीले एघार हजार भाडा लिँदा नेपाल एइरलाइन्सले सात हजार ३१५ रुपैयाँ मात्र लिएको उनले जानकारी दिए।